Shwengwe Games - Page 76 of 232 - Media and Entertainment
Myanmar Idol Season4ကနေ နှုတ်ဆက်လှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ နေလင်းကျော်
November 15, 2019 Shwengwe Games 0
Myanmar Idol Season4ကနေ နှုတ်ဆက်လှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ နေလင်းကျော် ဒီနေ့ည Myanmar Idol Season4ရဲ့ တတိယအပတ် Result Show ပွဲအပြီးမှာတော့ စိတ်မကောင်းစွာပဲ အိမ်ပြန်ရမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များ အားလုံးဟာ အမှတ်တရ […]
နောက်တစ်ဆင့်ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် တက်ရောက်သွားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်(၃)ယောက်
နောက်တစ်ဆင့်ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် တက်ရောက်သွားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်(၃)ယောက် ယနေ့ည Myanmar Idol Season4ရဲ့ တတိယအပတ် Result Show ရဲ့ ရလဒ်တွေကြေညာပြီးတဲ့နောက် ပြိုင်ပွဲဝင် (၃) ဦးကတော့ ပရိသတ်တို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် Save ဖြစ်သွားပါတယ်။အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ သီချင်းဖြင့် ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အက်စတာဒေါ့လ်ချင်းဆုန်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကငွေလမင်း […]
Myanmar Idol Season4ပြိုင်ပွဲမှာ စောခရစ်မူးလာ သီဆိုခဲ့တဲ့”အဆောင်သရဲ”သီချင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်လိုက်တဲ့ မူရင်းတေးရေးဆရာ
Myanmar Idol Season4ပြိုင်ပွဲမှာ စောခရစ်မူးလာ သီဆိုခဲ့တဲ့”အဆောင်သရဲ”သီချင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်လိုက်တဲ့ မူရင်းတေးရေးဆရာ ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ နာမည်ကျော် တေးဆို ဆလိုင်းဂျွန်သင်ဇမ်း ကို မှတ်မိကြပါသေးလား ။၉၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလတွေမှာ အရမ်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းအေးအေးလေးတွေကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ရွှေလက်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ပါ ။မနေ့ညကလည်း စောခရစ်မူးလာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အဆောင်သရဲ […]
” Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးကြောင့် ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ ထက်အဉ္ဇလီ “
” Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးကြောင့် ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ ထက်အဉ္ဇလီ “ Myanmar Idol ရဲ့ပရိသတ်တွေကြား အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့သီချင်းတွေကို တန်ဆာဆင်ပြီးသီဆိုကာပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းနှလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားသူလေးဖြစ်တဲ့ထက်အဉ္ဇလီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်Rock Weekယှဉ်ပြိုင်ဖျော်ဖြေမှုပွဲနေ့မှာသူ(၄)တန်းအရွယ်ထဲကခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကို ”ပါးပါးနဲ့လည်းတွေ့ချင်တယ်၊ညီမလေးကလည်းပါးပါးကိုလွမ်းနေတယ်။သမီးကိုဆက်သွယ်ပေးပါ”ဆိုပြီးသူဆီဆက်သွယ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထက်အဉ္ဇလီဟာမနေ့ညကယှဉ်ပြိုင်သီဆိုခဲ့တဲ့ “အမှတ်တရတက္ကသိုလ်”သီချင်းများကို သီဆိုရတဲ့ပွဲမှာနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်အေးချမ်းမေရဲ့“ကျောင်းဖွင့်ချိန်” သီချင်းလေးကိုကျောင်းပြီးအောင်မတတ်ခဲ့ရလို့တက္ကသိုလ်သီချင်းဆိုရတာအခက်အခဲရှိပေမယ့်ခံစားသက်ဝင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယှဉ်ပြိုင်သီဆိုအပြီးအမှာခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို “Hello…အချစ်တို့ရေ ထက်သတင်းကောင်းလေးပြောချင်လို့ပါရှင့်မနေ့ကပြိုင်ပွဲမှာထက်နဲ့လေးတန်းလောက်ထဲကခွဲခွါခဲ့ရတဲ့ထက်အရမ်းသတိရနေခဲ့ရတဲ့ပါးပါး(အဖေ)နဲ့ပြန်ဆုံနိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီရှင့်ထက်ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးရှင့်အားလုံးလည်းထပ်တူပျော်ရွှင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်”လို့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ […]
စာဖတ်တိုင်း မမှတ်မိမဲ့အတူတူ ဘာလို့စာဖတ်နေတာလဲ
စာဖတ်တိုင်း မမှတ်မိမဲ့အတူတူ ဘာလို့စာဖတ်နေတာလဲ ခေါင်းစဉ်လေးကသိပ်လှတယ်ဗျာ။ဘာတဲ့စာဖတ်တိုင်းမမှတ်မိမဲ့အတူတူဘာလို့ စာဖတ်နေတာလဲတဲ့။နည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းစားသွားမယ်ထင်တယ်ဗျ။ ကျနော်လည်းတွေ့စကခေါင်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းပေါ့လူပျင်းတွေကိုများတိုက်တွန်းနိုးဆော်ထားတဲ့စာလားဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားပြီးဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်(ကိုယ်ကလည်းခပ်ပျင်းပျင်းကိုး)။ စာပုဒ်လေးကိုအဆုံးထိဖတ်လိုက်မှ နားလည်သွားတော့တယ်။သိပ်မှန်တဲ့ စာသားလေးဗျာ။ ကျနော်စာဖတ်တာဝါသနာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျနော်စာဖတ်လိုက်တိုင်းရှေ့ကဟာဖတ်ရင်နောက်ကဟာမေ့နဲ့နောက်ကဟာဖတ်ရင်ရှေ့ကဟာမေ့နဲ့ သံသရာ လည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်တွေးထင်ခဲ့မိတယ်ငါဟာအလွန်ညံ့တဲ့ကောင်ဘဲဘာမှသုံးစားမရတဲ့ကောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီစာပုဒ်လေးဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအားတွေတက်လာတယ် ခွန်အားတွေပြည့်လာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာဖတ်ချင်စိတ်တွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကျနော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ပညာပေး စာပုဒ်လေးကတော့ တစ်နေ့တော့မြေးအဖိုးနှစ်ယောက်ဟာ ကမ်းစပ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။မြေးငယ်လေးကသူ့အဖိုးကိုမေးလိုက်တယ်”ဖိုးဖိုး ဖိုးဖိုးနေ့တိုင်းစာတွေဖတ်နေတာဘယ်လောက်မှတ်မိသလဲ မေ့သွားမဲ့အတူတူဘာလို့စာဖတ်နေတာလဲ”တဲ့ဒီအချိန်မှာအဖိုးကသူ့မြေးလေးကို ပြုံးပြပြီး “ဟိုနားကမီးသွေးထည့်ထားတဲ့ ခြင်းကြားလေးသွားယူခဲ့စမ်းမြေးလေး” လို့ပြောလိုက်တယ်မြေးလေးလည်းနားမလည်စွာနဲ့ဘဲခြင်းကြားကိုယူခဲ့တယ်”ကဲ အဲ့ဒီခြင်းကြားနဲ့ မြစ်ထဲကရေတွေကိုခပ်ခဲ့ပါအုံးမြေးလေး”လို့ ပြောတယ်။ […]
တိတ်တဆိတ် စိတ်ဓါတ်ကျနေသူများတွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာများ
တိတ်တဆိတ် စိတ်ဓါတ်ကျနေသူများတွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာများ လူတစ်ယောက်မှာစိတ်ကျရောဂါရှိ၊မရှိကိုတော့အလွယ်တကူခြေရာခံလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်းလူတစ်ယောက်မှာတိတ်တဆိတ်စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့စိတ်ရှိနေ၊မနေဆိုတာကိုတော့အလွယ်တကူသိလို့မရနိုင်ပါဘူး။တကယ်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်မှာတိတ်တဆိတ်စိတ်ဓါတ်ကျနေ၊မနေဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ.? သိခဲ့ရင်ရောဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲ.? (1) ရွှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိနေသူ စိတ်ဓါတ်ကျနေတာမျိုးကိုရွှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိနေသူတွေထံမှာ တွေ့နိုင်ဖို့ အရမ်းကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ Rochester Medical Center တက္ကသိုလ်မှသုတေသီတွေက ပြောပါတယ်။မိမိရဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ပြခဲလွန်းသူတွေ၊သူတို့ခံစားရတဲ့စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအကြောင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့ ထုတ်ပြကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းစိတ်ဓါတ်တက်ကြွနေတဲ့သူတွေမှာစိတ်ကျရောဂါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့မတွေးသင့်ပါဘူး။ (2) ပြည့်စုံလွန်းတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တော်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်၊အရမ်းကောင်းတဲ့အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းရှိတယ်။ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးရှိတဲ့ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုစိတ်ကူးနဲ့တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလူရဲ့ဘဝဟာပြီးပြည့်စုံလွန်းတယ်လို့ သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့်သူ့ဘဝမှာလည်းနာကျင်စရာကိစ္စတစ်ခုတော့ရှိခဲ့မှာပါ။စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ဒါကို […]
သူအမြဲဖဲ့နေကြ မက်ဆီကို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ချီးကျူးသွားခဲ့တဲ့ ပီလီ
သူအမြဲဖဲ့နေကြ မက်ဆီကို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ချီးကျူးသွားခဲ့တဲ့ ပီလီ ဘရာဇီးအသင်းနဲ့အတူအသက်(၁၆) နှစ်နဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားကိုကိုင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ဂန္တ၀င်ကစားသမားဟောင်းပီလီကတော့ဘာစီလိုနာကစားသမားမက်ဆီကိုထူးထူးခြာခြားချီးကျူးစကားပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဖလားကို(၃)ရရှိဖူးတဲ့အဆိုပါဘရားဇီးတိုက်စစ်မှူးဟာကမ္ဘာ့ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၇၉)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပီလီဟာအာဂျင်တီးနားသားမက်ဆီကိုအမြဲေ၀ဖန်ခဲ့ဖူးပေမယ့်ဒီတစ်ခါမှာတော့ချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာကလပ်အသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေ တစ်ဦးချင်းဆုတံဆိပ်တွေရခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံအသင်းဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အတူတစ်ကြိမ်မှအောင်မြင်မှုရယူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ မက်ဆီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပီလီက“မက်ဆီကအရည်အချင်းပြည့်၀တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။အသင်းဖော်တွေ ဂိုးရရှိဖို့လည်းပံ့ပိုးပေးနိုင်သလိုသူကိုယ်တိုင်လည်းဂိုးသွင်းယူနိုင်တဲ့ကစားသမားပါ။ ဘောလုံးပေးပို့မှုလိမ်ခေါက်စွမ်းရည်ပါပြည့်၀တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။” “ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်သာတစ်သင်းထဲမှာကစားရင်ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေအခက်တွေ့မှာအသေချာပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့သတိထားရမှာနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီတစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး။မက်ဆီဟာဒီနောက်ပိုင်းခေတ်မှာပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ”လို့ချီးကျူးပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီပရိသတ်တချို့ကတော့အဆိုပါ ပြောဆိုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပီလီတစ်ယောက်အမြင်မှန်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီလို့ မှတ်ချက်ပေးရေးသားပြောဆိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Ref; Goal Timothy(မိုမိုလေး) […]
ကြာသာပ​တေးသားသမီး​တွေ အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ကြာသပ​တေးသားသမီးတွေဟာချစ်သူကို အရမ်း ချစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့ကို စိတ်နာအောင်တော့သွားမလုပ်လေနဲ့စိတ်နာရင်တစ်သက်လုံး လှည့်ကြည့်မှာ မဟုတ်ဘူး။စိတ်ကတော့ ကောက်သလားမမေးနဲ အားနေ တခုခုကို ကောက်နေရမှ အကြာကြီးတော့ စိတ်မဆိုးတတ်ဘူး။ သူတို့ဟာ အရှက်အကြောက် အရမ်းကြီးတယ် ချစ်သူကို စာနာနားလည်မှုလည်းပေးနိုင်တယ် ပေးကမ်းရက်ရောတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်ယောက်မရှိဘူး။စကားနည်းတယ်လို့ထင်ရတယ်။အဲ့ဒါဟာလည်းမသိတဲ့သူတွေနဲ့သာနည်းတာပါသူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာတော့ သူပဲစကားအများဆုံး။ သူငယ်​ချင်းတွေအပေါ်မှာအနစ်​နာခံတယ်​ဒါကလည်းသံ​ယောဇဉ်​ကြီး အ​ပေါ်ယံ ​ပေါင်းသင်းတာမျိုးမဟုတ်တာတော့လုံးဝ […]
၂၀၂၂ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာပထမဆုံးနိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသားအသင်းအားAYA Bank က ကျပ်သိန်း ၇၀၀ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်
၂၀၂၂ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာပထမဆုံးနိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသားအသင်းအားAYA Bank က ကျပ်သိန်း ၇၀၀ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၂၂ ခြေစစ်ပွဲမှာ တာဂျစ်စတန်အသင်းအား အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာလက်ရွေးစင်အမျိုးသားအသင်းကို AYA Bank က ကျပ်သိန်း ၇၀၀ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၂၂ ခြေစစ်ပွဲကို မနေ့ညနေပိုင်းက […]
၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ် ပွဲမှာပထမဆုံးနိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်း
၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ် ပွဲမှာပထမဆုံးနိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်း ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်၂၀၂၃ အာရှဖလား‌ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုအဆင့် စတုတ္ထမြောက်ပွဲစဉ်မှာ နည်းပြတွမ်နီဟေးလက်ထပ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာတဲ့မြန်မာအသင်းက ၃ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ ရမှတ်၆မှတ်ရရှိထားတဲ့ တာဂျစ်ကစ္စတန်အသင်းကို ၄ဂိုး၃ဂိုးဖြင့်အနိုင်ယူကာ ပထမဆုံးနိုင်ပွဲကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခြေစစ်ပွဲ၃ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ ၃ပွဲလုံးရှုံးနိမ့်ပြီးရဂိုးမရသေးတဲ့မြန်မာအသင်းဟာ ယခုပွဲမှာတိုက်စစ်ထက်မြတ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မောင်မောင်လွင်က ညာတောင်ပံတိုက်စစ်မှာသာမကဘဲနောက်ချန်တိုက်စစ်မှုးအဖြစ်ပါရွေ့လျားကစားတာကိုတွေ့ရသလိုဆော်လမန်ကလည်း ပြိုင်ဘက်ဂိုးဧရိယာထဲမှာနေရာယူမှုကောင်းခဲ့လို့ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တာဂျစ်ကစ္စတန်အသင်းကလည်း ဘယ်တောင်ပံတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတိုင်းကစားပြီးလျှင်မြန်တဲ့ကစားမှုတွေနဲ့မြန်မာခံစစ်ကိုဖိအားပေးကစားခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားတစ်ချို့အပြောင်းလဲလုပ်ထားပြီးအသင်းခေါင်းဆောင် ဇော်မင်းထွန်း ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာအသင်းရဲ့ခံစစ်ဟာအားနည်းမှုတွေရှိနေခဲ့သော်လည်းယခင်ပွဲတွေကထက် ကစားပုံတည်ငြိမ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပြီးပြိုင်ဘက်ရဲ့အပိုင်ဂိုးသွင်းမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ […]
« 1 … 75 76 77 … 232 »
ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပေမယ့် အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသေးတဲ့ မီးသတ်ရဲဘော်လေ
လူတွေ သိပ်မသိကြတဲ့ ပင်စိမ်းငှက်‌ပျောသီးရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
ကျိန်စာသင့် ဘိလပ်ပြန်ခေါင်းလောင်းနှင့် မင်းဖြူမှန်မှန်ပြော ၅၅၅၅၅ ရဲ့ နက္ခတ်လျှို့ဝှက်ချက်
ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ အသက် ၂၃ နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ Project K အဖွဲ့ဝင် မင်းခန့်ဟိန်း